Beta ọha nke Android Q na -abịa na Xiaomi Mi 9 na Redmi K20 Pro | Androidsis
Xiaomi malitere ịhapụ beta ọha na eze nke gam akporo Q maka Mi 9 na Redmi K20 Pro
Dịka akọwapụtara OnePlus dị ka otu n'ime ndị na -emepụta ama ama nke na -echegbu onwe ya maka idobe ngwaọrụ ha na mmelite kachasị ọhụrụ, Xiaomi pụtakwara maka otu uru a. Mana anyị anaghị ekwu maka naanị OTA dị mfe, kamakwa maka ụdị beta nke A gam akporo Q, sistemụ arụmọrụ na -esote nke ụlọ ọrụ abụọ ahụ na -etinye n'ọrụ na ụfọdụ ọdụ ụgbọ mmiri ha site na ngwa nnwale dị iche iche ewepụtara na ya.
Na mbido July, Xiaomi wepụtara beta Q nke gam akporo maka Anyị bụ 9 y Redmi K20 Pro -amara dị ka Xiaomi Mi 9T Pro na mpụga China na India - mana ọ bụghị n'ihu ọha na imeghe. Kedu ihe nke a pụtara? Ọ dị mma, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole nwere ike ịnweta ya, ebe imirikiti ndị mmadụ enweghị. Agbanyeghị, ọ na -amalite ugbu a na China maka ndị chọrọ ịnweta atụmatụ Google OS kachasị ọhụrụ.
Ndị nọ na ROM China bụ naanị ndị nwere ike isonye ugbu a, nke bụ ihe nwute, ebe ọ bụ na enwere olile anya na, naanị otu oge, ndị ọrụ niile nwere ike nweta ya. Anyị na -atụ anya na ngalaba ụwa ga -enwetakwa beta, n'agbanyeghị na ọ nwere ike iwe obere oge.
MIUI dabere na gam akporo Q agaghị eweta mgbanwe dị ukwuu na ihu ekwentịMana ị ga-enwekwu nzuzo na ikikere akọwapụtara ngwa, ọbụlagodi maka ngwa na-arụ n'okirikiri.
Xiaomi Mi 9 na Redmi K20 Pro ma ọ bụ Xiaomi Mi 9T Pro anaghị egosi ọtụtụ ọdịiche n'etiti ha, ewezuga n'akụkụ ụfọdụ dịka imewe, enyo, igwefoto n'ihu na ụfọdụ ndị ọzọ, mana ọ bụghị na ọkwa nhazi, RAM na ngalaba ndị ọzọ. N'akụkụ izugbe, ha bụ ọnụ ọnụ yiri ibe ha, ọ bụ ezie na nke ikpeazụ adọtala nlebara anya karịa nke Mi 9 mepụtara n'oge mmalite nke ya, ee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi malitere ịhapụ beta ọha na eze nke gam akporo Q maka Mi 9 na Redmi K20 Pro
Telegram mmelite jiri nwayọ mode, ozi dị jụụ na ndị ọzọ